तपाईंको फेसबुक अरु कसैले चलाएको त छैन? यसरी पत्ता लगाउनुस् – Everest Dainik – News from Nepal
तपाईंको फेसबुक अरु कसैले चलाएको त छैन? यसरी पत्ता लगाउनुस्
एजेन्सीः सामाजिक सञ्जालहरुमा फेसबुक निकै लोकप्रिय भइरहेको छ । फेसबुक नचलाउने मानिस भेट्न मुश्किल हुन्छ । तर फेसबुक कसरी चलाउने, किन चलाउने र कसरी सुरक्षित तरिकाले चलाउने भन्ने कुरा भने कमैलाई मात्र थाहा छ ।
त्यसपछि ‘Security and login’अप्शनमा जानुस्
त्यहाँबाट‘’Where you’re logged in’ को अप्शन देखिन्छ । त्यहाँ तपाईंको फेसबुक लगइन भएको डिभाइसको पूरा जानकारी पाउन सकिन्छ ।
त्यसपछि ‘Security and login’ जानुहोस्
त्यहाँ ‘’Where you’re logged in’ अप्शन देखिन्छ ।
त्यसमा ‘See all’ मा क्लिक गर्नुस् ।
ट्याग्स: फेसबुक, सामाजिक सञ्जाल